Somtel – Puntland Post
Somtel Puntland (Bulsho Koriso)
Shirkadda Isgaarsiinta SOMTEL ayaa ka mid noqotay shirkadaha loogu isticmaalka badan yahay Dalka Soomaaliya, Shirkaddan oo mudo aan fogeyn adeegeeda Isgaarsiineed ka bilowday degaanada Puntland ayaa la soo baxday qaab ka duwan shirkadihii horey uga jirey Dalka, Iyadoo si degdeg ah u kasbatay Malaayiin ku nool Gobaladda Puntland.
Ka hor Shirkadda Isgaarsiinta SOMTEL, Way adkayd inaad Puntland ka heshid adeeg wanaagsan oo Internet, waxaa aad u taya liitay adeega Internetka ee laga heli jirey Puntland waxaana aad u yaraa Dadka Isticmaala adeegan casriga ah ee Aduunka oo dhan ka dhigay hal Tuulo. Kadib imaanshihii SOMTEL waxaa si degdeg ah isku badelay tayadii Internetka, waxayna shirkadda SOMTEL keentay adeeg Internet oo aad u xawaara sareeya kana mid ah kuwa ugu casrisan aduunka, Si lamid ah isbadelka Internetka waxaa sara u kacay Dadka Isticmaala adeegan .
Dr Sayid Maxamed Cabdulle Xassan oo ah maareeyaha Guud ee Shirkadda SOMTEL Puntland mar uu Warbaahinta Puntland kula hadlaayey xafiiskiisa Magaalada Garowe wuxuu shirkadan ku micneeyey Bulsho koriso ee aysan ahayn mid eegata uun jeebka dadweynaha. Isagoo taasna Tusaale uga dhigay sida ay shirkadani si degdeg ah ugu kasbatay quluubta umadda Soomaaliyeed, Dr Sayid oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay SOMTEL Si joogto ah ugu saami celiso macaamisheeda iyadoo ku abaal marisa wax muuqda sida Baabuur, Mobilo, Laabtoobyo iyo wax yaaba kale oo aad u casri ah.
Waxyaabaha kale ee Shirkadu soo kordhisay waxaa ka mid ah kaararka Prepiadka, iyo Post Paidka oo 50% lagaa dhimayo, Tusaale hadaad Bisha isticmaashid $100 Dollar waxaad bixinaysa $50 Dollar kaliya, kaasoo meeshaad doonto oo caalamka ah aad ku wici karto lagagana soo wici karo, si lamid ah hadii aad $2 Dollar ku subatid adeega Prepaidka Mobilekaga waxaad helaysaa 50 daqiiqo dheeri ah, Halka hadii aad $3 Dollar ku shubatidna aad helaysid 100 daqiiqo oo dheeri ah.
Adeega E-Dahab Waa adeeg Casri ah oo aad Mobilkaga lacagtada ku shuban kartid, lagugu soo shubi karo, sidoo kalena isaga bixin karto, iskuulka ama jaamacada, guriga kiradiisa, korontada, Biyaha IWM, Xitaa waxaad lacag u diri kartaa dalka dibadiisa, waana lagaaga soo diri karaa, Iyadoo aysan wax khidmad ah kaa go’ayn.
Adeega 4G oo ah mucjisada sanadka ayay shirkada Somtel u keentay macaamiisheeda, taas oo si wayn loogu baahi baxay. Internet kii ugu xawaare sareeyay caalamka weeye adeeg 4G. Runtii waa farxad aad u wayn oo la sugaayay in ay mar uun helaan bulshada reer Puntland.
Waxaa intaas dheer adeega tabiye oo aad ku ogaan kartid wicitaanadii ku seegay inta telefoonkaagu dansanaa ama uu hawada ka maqnaa. Adeega Danan oo aad mobilka ku xiran karto codadka aad doonto, Sida Naashiidooyinka, gabayada, guurowga iyo wax kasta oo aad jeceshahay.
Hay’adaha Dawliga ah, Kuwa Caalamiga ah iyo Kuwa Maxaliga ah oo xafiisyadooda ku xirtay adeega Internet ee SOMTEL Waxayna si aada ugu amaaneen inay kaga nasteen adeegii Internet ee aadka u qaaliga ah oo laga keeni jirey Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya, Waxayna tilmaameen in adeega Internet ee ay bixiso Shirkadda SOMTEL uu kamid yahay kuwa ugu casrisanaa aduunka, Hay’adaha bogaadiyey adeega Internet ee Shirkadda SOMTEL waxaa ka mid ah Shirkadaha dhisaaya Garoomadda diyaaradaha Bosaaso iyo Garowe. Adeega Xawaarihiisu dheereeyo ee High Speed Internet ayaa sidoo kale suura geliyey inay kor u kacdo Waxbarashadda Puntland iyadoo Dadweynuhu si fudud wax uga baran karaan Jaamacado ku yaal Aduunka oo dhan si Online ah.
TV-yada Soomaalida iyo kuwa Caalamiga ah ayaa bilaabay inay Xafiisyo waaweyn ka furtaan Gudaha Puntland markii uu soo kordhay Iternetka xawaarihiisu dheereeyo ee Shirkadda SOMTEL iyagoo si Toos ah u tebiya wararka iyo Barnaamijyada taas oo horay aad u adkayd, Barmaajiyadii ugu danbeeyey ee Shirkadda SOMTEL fududaysay in si toos ah looga tabiyo markii ugu horaysay Puntland waxaa ka mid ah, La xisaabtankii Xukuumada Puntland, Furitaankii Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Magaaladda Bosaaso iyo Munaasabadii sanad guurada 2-aad ee xukuumadda Puntland.
HADAL OO HEL
Shirkadu waxay ku Abaalmarisaa dadka ku guuleystay barnaamijka Hadal oo Hel qaab computerized ah ayada oo dhamaan numbers kii ku shubtay lacagta ku hadalka uu dhex mari doono.waxaana inta qof ee nasiibka u yeelata abaalmarintana Lagu gudoonsiinayaa Munaasabad ballaran oo ay kasoo qeybgaleen masuuliyiinta shirkada Somtel kuwa dawlada, Aqoon yahay, Ganacsato iyo cuqaal.